Britain oo fursadii ugu dambeysay siinaaya Maamulka Siilaanyo – idalenews.com
Wasiirka Britain u qaabilsan Arrimaha Africa Mr Mark Simon ayaa lagu wadaa in iminka uu soo gaaro Dalka Ethiopia si uu halkaasi kulan ula qaato Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo.
Kulanka u dhexen doono Mr Mark Simon iyo Madaxweynaha Maamulka Somaliland Siilaanyo, ayaa noqon doona Kulan ugaar ah Mas’uulkaasi Britain usoo xil saaratay in Siilaanyo uu kala hadlo sidii ay u ajiibi lahaayeen Dacwada ku aadan Shirka la filaayo inuu Dhawaan ka furmo London.
Mr Mark Simon, ayaa la sheegayaa inuu wado farriin ka socta Ra’isul wasaare Dalkaasi Britain David Cameron oo la xiriirta sidii uu Madaxweyne Siilaanyo uga noqon lahaa go’aanka uu ku qaadacay ka qayb galka shirka London ee uu Ingiriisku qabanayo bisha May.
Ilo xogagaal ah ayaa sheegaya in Ra’isul wasaaraha Britain David Cameron, ku hanjabay inuu Xiriirka u jari doono Maamulka Somaliland isla markaan Jari doono caawinta Maamulkaasi haddii ay ku adkeysadaan Go’aankii ahaa inaysan ka qeybgali doonin Shirka May oo ay martigalisay Britain.
Britain ayaa lagu wadaa inay qaadato Go’aan degdeg ah haddii Maamulka Somaliland ay soo xaadiri waayaan Shirka London, iyadoo Diplomaasiyiin ka tirsan Britain ay sheegeen in had iyo jeeral ay taageeri doonaan Xukuumadda Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, waxan la ogeyn go’aanka uu Madaxweynaha Maamulka Somaliland qaadan doono, iyadoo Siyaasiyiinta falanqeysa Siyaasadda Somalia Saadaaliyeen in ugu dambeyntii Maamulka Somaliland ku soo biyo shuban doono iney ku biiraan Somalia inteeda kale.